မောင်ပေါ်ထွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(1935-05-14)၁၄ မေ၊ ၁၉၃၅
မောင်ပေါ်ထွန်း (၁၄ မေ ၁၉၃၅ မွေးဖွား) သည် အမျိုးသားစာပေဆုရ မြန်မာအမျိုးသား စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
၃ မောင်ပေါ်ထွန်း ရေးသား ခဲ့ပြုစုခဲ့သော စာအုပ်များ
ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင်မြို့နယ် ရွှေမျက်ဝရွာတွင် အဖ ပန်းချီပန်းပု လက်သမား ဆရာကြီး ဦးမောင်ပု၊ အမိဒေါ်အေး တို့မှ ၁၉၃၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ အမည်ရင်းမှာ ခင်မောင်စိုး ဖြစ်သည်။ မူလတန်းပညာကို ဇာတိရပ်ရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းတို့တွင် သင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၅ နှစ်သားတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်လာခဲ့ပြီး အလွတ်ပညာကျောင်း တက်သည်။ လှကော်မာရှယ်ကောလိပ်မှ မြန်မာလက်ရေးတို ပထမဆုရခဲ့သည်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း (စာပေဗိမာန်) အဖွဲ့၌ လက်နှိပ်စက် လက်ရေးတိုစာရေးအဖြစ် စတင်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၆၇ -၆၈ ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းစာမေးပွဲကို အင်္ဂလိပ်ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်သည်။ သတင်းစာပညာ အတတ်သင်ကျောင်း အပတ်စဉ် (၁) တွင် ပထမဆု ရရှိသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် လုပ်သားများကောလိပ်မှ ဝိဇ္ဇာ (သမိုင်းဘွဲ့) ရသည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် စာပေဗိမာန် စာအုပ်အသင်း ကြီးကြပ်ရေးမှူး အဖြစ်မှ အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် စာပန်းချီမဂ္ဂဇင်း၌ ခုနစ်နှစ်အရွယ် သမီးငယ် (Seven Year Old Girls) ရုရှားပုံပြင် ဘာသာပြန်ဖြင့် စာပေလောကသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်များတွင် ဘာသာပြန်ဝတ္ထု၊ ဆောင်းပါးများ ကြိုကြား ကြိုကြား ရေးသားခဲ့သည်။ စာအုပ်လောက စာစောင်၊ ပန်မဂ္ဂဇင်း၊ ချယ်ရီ မဂ္ဂဇင်းနှင့် စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းတို့တွင် အယ်ဒီတာ၊ အယ်ဒီတာချုပ်နှင့် အတိုင်ပင်ခံအယ်ဒီတာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
နိုင်းမြစ်ဝှမ်းမှတော်လှန်ရေး၊ ကျွန်မချစ်တဲ့ ဆူကာနို၊ ပင်တဂွန်၊ ယက်ဖ်တူရှင်ကို၊ မောင့်ဘက်တန်နှင့် အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ၊ ကမ္ဘာ့ရန်၊ အကြီးအကဲ၊ ကျေရာကျေကြောင်း၊ ငွေရှာနည်း ငွေသုံးနည်း၊ စံပြအရောင်းသမား၊ ဟားဗတ်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ မသင်ခဲ့ရသမျှ၊ စံပြ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စဖြင့် ကြီးပွားရေး၊ မဟာဒီလှိုင်း၊ အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ်သုံး အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါကျမ်း၊ ခေတ်သစ် ရောင်းဝယ်ရေး ဗျူဟာ၊ ကန္တာရ စမ်းရေအိုင် စသည့် ဘာသာပြန်လုံးချင်း စာအုပ်ပေါင်း ၅ဝ ခန့် ပြန်ဆိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၁ဝ) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်လျက် ရှိသည်။
မောင်ပေါ်ထွန်း ရေးသား ခဲ့ပြုစုခဲ့သော စာအုပ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ကျားဘမ်း သူဌေးကြီး၏ စီးပွားရေး စွန့်စားခန်းများ
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တို့ လမ်းစဉ်
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆက်ဆံရေး ကျင့်ဝတ်များ
မောင့်ဘက်တန်နှင့် အိန္ဒိယ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲ
ဟားဗတ်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်တွင် မသင်ခဲ့ရသမျှ
အဆင့်မြင့် အောင်မြင်သူတို့၏ အလေ့အထများ
အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ်သုံး အင်္ဂလိပ်စာ သဒ္ဒါကျမ်း
↑ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီး ဌာန (ရုံးချုပ်) စာတည်း အဖွဲ့, ed. (ဧပြီ ၂၀၀၃)။ နှစ်ဆယ် ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ များနှင့် စာစု စာရင်း (ပထမအကြိမ် ed.)။ ပညာရွှေတောင် စာအုပ်တိုက်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မောင်ပေါ်ထွန်း&oldid=670140" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၅:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။